ဒိုင်နိုဆောများ (အင်္ဂလိပ်: Dinosaurs)
Temporal range: Late Triassic–Present, 233.23 –0Mya (ရုပ်ကြွင်းကာလ အပိုင်းအခြားတွင် ငှက်(Aves)များလည်းပါဝင်သည်)
(မှတ်တမ်းများအရ ထရိုင်အတ်စစ် ခေတ်လယ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိ)
ဒိုင်နိုဆော ရုပ်ကြွင်းအရိုးစု ဓာတ်ပုံများ စုစည်းထားမှု၊ ဝဲ-အပေါ်မှ နာရီလက်တံအတိုင်း : Microraptor gui (a winged theropod), Apatosaurus louisae (a giant sauropod), Edmontosaurus regalis (a duck-billed ornithopod), Triceratops horridus (a horned ceratopsian), Stegosaurus stenops (a plated stegosaur), Pinacosaurus grangeri (an armored ankylosaur)
?†en:Pisanosaurus (en:Ornithischia? or en:Silesauridae?)
ဒိုင်နိုဆော ဆိုသည်မှာ အာခိုဆော အမျိုးအစား တွားသွားသတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မီဆိုဇိုးရစ် ကာလအတွင်းက ကုန်းပေါ်တွင် အများအပြားရှိသော သတ္တဝါမျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ ဒိုင်နိုဆောဆိုသော စကားလုံးမှာ ဂရိဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ပုတ်သင်ညို (terrible lizard) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဇီဝဗေဒ ပညာရှင် ရစ်ချက်အိုဝင်က ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒိုင်နိုဆောများကို လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၂၃၀ ခန့် အားပါး ထရိုင်ဆစ်ခေတ်က ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ဂျူရက်ဆစ်ခေတ် အစောပိုင်းတွင် သူတို့သည် ကုန်းမြေပေါ်ရှိ ဒေသအများစုတွင် လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ သူတို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၅ သန်းခန့်အထိ ရှိလာခဲ့ကြပြီး ရုတ်တရက် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ကြသည်။ ငှက်များသည် သာရိုပေါ့ ဒိုင်နိုဆောများမှ ဆင်းသက်လာကြပြီး ကုန်းမြေပေါ်ရှိ ဒိုင်နိုဆောအားလုံးမှာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဒိုင်နိုဆောများသည် ဘူမိဗေဒ သက်တမ်းအရ Triassic Period (ထရိုင်ယဆစ်ယုဂ်)အတွင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း ၂၂၅ သန်းက ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော သတ္တဝါများသည် ကြက်တစ်ကောင်၏ အရွယ်အစားခန့်သာ ရှိကြ၏။ အချို့သော သတ္တဝါများကမူ ကမ္ဘာပေါ်၌ ရှိခဲ့ဖူးသော အရွယ်အစား အကြီးဆုံး သတ္တဝါများ ဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် Jurassic Period (ဂျူရက်ဆစ်ယုဂ်)တစ်လျှောက်လုံးနှင့် Cretaceous Period (ခရီးတေးရှတ်ယုဂ်)ကုန်ဆုံးသည်အထိ လှည့် လည်သွားလာနေခဲ့ကြ၏။ ထရိုင်ယဆစ်ယုဂ်၊ ဂျူရက်ဆစ်ယုဂ်နှင့် ခရီးတေးရှတ်ယုဂ်တို့ကိုတွားသွားသတ္တဝါများခေတ် ဟု သတ်မှတ်ထားကြ၏။ ဒိုင်နိုဆောများသည် ယခုခေတ်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ် ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင် တွေ့ရသည့် ဒိုင်နိုဆောတစ်ချို့သည် အတုများသာ ဖြစ်သည်။ အရမ်းတော်ကြတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဒိုင်နိုဆောများကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည် ဖြစ်သည်။ နောက် ရာစုနှစ်အတွင်း ဒိုင်နိုဆောများသည် မြေပြင်ပေါ်၌ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ဒိုင်နိုဆောများကို လူသားများက မွေးမြူနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
တင်ပါးရိုး တည်ဆောက်ပုံအရ အဆိုပါ ရှေ့ပြေးဒိုင်နိုဆောတို့မှ ဆော်ရစ်ချီးယား (Saurischia) နှင့် အော်နီသစ်ချီးယား (Ornithischia) ဟူ၍ အထင်ကရ အုပ်စုနှစ်ခု ကွဲထွက်လာခဲ့သည်။ ဆော်ရစ်ချီးယားသည် နဂိုတွားသွားသတ္တဝါတို့၏ တင်ပါးရိုး တည်ဆောက်ပုံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆီးစပ်ရိုးသည် ရှေ့ဖက်သို့ လှည့်နေသည်။ အော်နီသစ်ချီးယား၌ ဆီးစပ်ရိုးသည် အောက်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်သို့ လှည့်နေပြီး တင်ပါးခွက်ရိုးနှင့် အပြိုင်ဖြစ်နေကြသည်။
အော်နီသစ်ချီယန်မျိုးနွယ်သည် ခြေနှစ်ချောင်းထောက် အရွက်စားသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ထရိုင်ယဆစ်ယုဂ်နှောင်းပိုင်းတွင် နေထိုင်သည့် အော်နီသစ်ချီယန်တို့မှာ ဟက်ထရိုဒွန်တိုဆော (Heterodontosaur) ဖြစ်သည်။ ဟက်ထရိုဒွန်တိုဆော၌ အခြားတွားသွားသတ္တဝါများနှင့် မတူပဲ သွားသုံးမျိုးရှိသည်။ နှုတ်သီးနှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် သွားတစ်စုံမှာ ကိုက်ဖြတ်သွား(Incisor) မျိုးဖြစ်သည်။ အသားကိုက်ဖြတ်ရန် သင့်လျော်သည်။ အံဆုံးဖက်၌ ပြားပြီးထုထည်ရှိသည့် အံသွား (Molar) တို့ရှိကြသည်။ ၎င်းကမူ အရွက်ကိုကြိတ်ဝါးရန် အသုံးဝင်သည်။ နောက်ဆုံး သွားမျိုးမှာ ကိုက်ဖြတ်သွားစုံ၏ အနောက်ဘက်တွင် ရှိသည့် အစွယ်တစ်စုံဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်ရှာရန်၊ သားရဲတို့ကိုခြောက်လှန့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ တဖန်ကိုက်ဖြတ်သွားနှင့် အံသွားနှစ်မျိုး လုံးရှိနေ၍ အစုံစားကောင်ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပေရာ အစွယ်သည် အမဲလိုက်ရာတွင် အသုံးဝင်ကောင်း ဝင်ပေမည်။
↑ "A Late Triassic dinosauriform from south Brazil and the origin of the ornithischian predentary bone" (2007-01-01). Historical Biology 19 (1): 23–33. doi:10.1080/08912960600845767. ISSN 0891-2963.
↑ "The Late Triassic dinosauromorph Sacisaurus agudoensis (Caturrita Formation; Rio Grande do Sul, Brazil): anatomy and affinities" (in en) (2013-01-01). Geological Society, London, Special Publications 379 (1): 353–392. doi:10.1144/SP379.16. ISSN 0305-8719. Bibcode: 2013GSLSP.379..353L.
↑ "A Unique Late Triassic Dinosauromorph Assemblage Reveals Dinosaur Ancestral Anatomy and Diet" (2016). Current Biology 26 (22): 3090–3095. doi:10.1016/j.cub.2016.09.040. PMID 27839975.
↑ "A paraphyletic 'Silesauridae' as an alternative hypothesis for the initial radiation of ornithischian dinosaurs" (2020-08-26). Biology Letters 16 (8): 20200417. doi:10.1098/rsbl.2020.0417. PMID 32842895.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုင်နိုဆော&oldid=744772" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၄:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။